Darawallada Android ku soo noqo Linux Kernel 3.3 | Laga soo bilaabo Linux
Darawallada Android waxay ku laabtaan Kernel Linux 3.3
Laga soo bilaabo H-Online.com Waxaan ku ogaadaa warkan.
Waxay dhacdaa taas mahaddeeda Greg Kroah-Hartman wadayaasha Android maxaa a mar waa laga noqday kernel (Linux v2.6.33) sanadkii la soo dhaafay ee 2010, waxay ku laaban doonaan Linux kernel (v3.3) 🙂
Fikradda ayaa ah in qaabkan (3.3), ay haddaba suurtagal tahay in la bilaabo qalab Android ah iyada oo aan loo baahnayn in lagu dhejiyo balastar ama wax la mid ah kernel sida oo kale. Si kastaba ha noqotee, wax walbaa kama soo wareegi doonaan laanta ama aagga horumarinta (halka ay darawaladu hadda ku sugan yihiin) una wareegi doonaan laanta xasilloon, ma garanayo sababta ... Waxaan qiyaasayaa inay tahay ku meel gaar.
Tusaalaha ay noo sheegayaan ayaa ah lambarka WakeLock (wuxuu kordhiyaa nolosha batteriga) kuma jiraan.
Kooxda Macaamiisha Elektarooniga ah (ee Linux Foundation) oo ay weheliyaan dhowr horumariyayaal kale, ayaa si wadajir ah ula shaqeynaya Kroah-Hartman mashruucan. Tim Bird, oo ah madaxweynaha Kooxda Dhismaha, ayaa yiri socda el Mashruuca ugu muhiimsan ee Android iyada oo ujeedadu tahay isku dubaridka shaqada isdhexgalka astaamaha Android. Horumariyayaashu waxay xiiseynayaan inay gacan ka geystaan ​​isku-darka batariyada 'Android' udub-dhexaadka weyn ay isdiiwaangelin karaan liiska boostada.
Waa hagaag, waa kan it
Android Marwalba waan dhahaa, waxay leedahay waxbadan oo suurtagal ah ... Waxaan u maleynayaa inaysan taasi shaki ku jirin taas. Waxaan kuu soo qaadan doonaa maqaal kale Android kombiyuutarrada, ku sug 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Darawallada Android waxay ku laabtaan Kernel Linux 3.3
Waan ogahay barnaamijyada qaar ee loogu talagalay Android, kaliya waan baranayaa, kumbuyuutarradana waxaad u gudbin doontaa Android x86, waan fahamsanahay inay kufiican tahay kombuyuutarrada Asus Eee, waxaan ku tijaabiyay netkeyga, mini mini, mishiinka meertada ah iyo ma shaqeyneyso shabaq fiican, laakiin haddii kale waa mudan tahay isku day
Xaqiiqdii, xitaa ethernet maahan midka kaliya ee soo bandhiga dhibaatooyinka. Sidaan idhi, waxaan dhamaynayaa maqaal kahadlaya Android oo kujira barnaamijyada kale, mar dhaw (maanta oo suurta gal ah) waanu daabici doonaa 😀
Waad salaaman tihiin kuna soo dhawow bartayada 🙂
Qorfe: qolofta cusub ee Linux Mint
Ku muuji magaca faylasha buuxa desktop-ka Xfce